ကမ္ဘာ့ပြိုင်ဘက်ကင်း ရေဒါစနစ်အသစ်ကို တည်ဆောက်နေပြီဖြစ်တဲ့ ရုရှား - SKY Media
ကမ္ဘာ့ပြိုင်ဘက်ကင်း ရေဒါစနစ်အသစ်ကို တည်ဆောက်နေပြီဖြစ်တဲ့ ရုရှား
ရုရှားနိုင်ငံရဲ့ နောက်ဆုံးပေါ် ဒုံးကျည်ကာကွယ်ရေး ရေဒါ “ရာ့ခရိုမာ” Yakhroma ကို ချူ့ခိုးစခဲ ပင်လယ်ဘက်တွင် ၂၀၃၀ ခုနှစ်မှာ အပြီးသတ် တည်ဆောက်သွားမယ်လို့ သိရပါတယ်။ အဲဒီ့ဒေသဟာ အမေရိကန်နိုင်ငံ အလက်စကာ ပြည်နယ်နှင့် အများကြီးမဝေးကွာတဲ့ နေရာမှာတည်ရှိပါတယ်။ဒီရေဒါဟာ အလိုအေ လျာက်လည်ပတ်မှာဖြစ်ပြီး ရေဒါစခန်းမှာအမြဲတမ်း ၀န်ထမ်းကိုအသုံးပြုမှာ မဟုတ်ဘူးလို့လဲ သိရပါတယ်။ ၂၀၂၀ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလကုန်ပိုင်းတွင် ရုရှားကာကွယ်ရေး ၀န်ကြီး Sergei Shoigu က နှစ်ကုန်ဝန်ကြီးများဘုတ်အဖွဲ့အစည်းအဝေးတွင် ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဟာ ၂၀၂၁ ခုနှစ်မှာ ကရင်းဒေသရှိ ရှိ ဆီဗာစတူပေါ တွင် Yakhroma ရေဒါကို စတင်တည်ဆောက်လိမ့်မည်ဟုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ဝန်ကြီးဟာ ဒီ ရေဒါရဲ့ separate nodes တွေကို လေကြောင်းပစ်မှတ်တွေရှာဖွေဖို့ရာ ကာလီနင်ဂရတ်၊ ဇီး နှင့် ဗော်ကူတာ ဒေသတွေမှာလဲ တည်ဆောက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောကြားသွားပါသေးတယ်။ဒီရေဒါမှာ လေယာဉ်ထိန်းချုပ်ရေးစနစ်တွေ၊ လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးစနစ်တွေနှင့် တခြား ဒစ်ဂျစ်တယ်စနစ်တွေပါ ပါဝင်နိုင်မယ်လို့သိရပါတယ်ရရှိထားသောသတင်းများအရ ယခု ရေဒါဟာ ကမ္ဘာပေါ်တွင် ပြိုင်ဘက်ကင်း ရေဒါဖြစ်လာဖွယ်ရှိပြီး မီတာ၊ စင်တီမီတာ၊ ဒက်စီမီတာ၊ မီလီမီတာ အစရှိသဖြင့် ကြိမ်နှုန်းလေးမျိုးဖြင့် အလုပ်လုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပြီး ၂၇၀ ဒီဂရီမြင်နိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။
လက်ရှိ ရှရုားဒုံးကျည်ကာကွယ်ရေးစနစ်မှာ အလွှာ ၂ ခုဖြင့်အလုပ်လုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒါတွေကတော့ Tundra လို့ခေါ်တဲ့ အာကာသဂြိုဟ်တု ၄ ခုနှင့် ၎င်းတို့နှင့်ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ မြေပြင်ကွန်ယက် Voronezh ရေဒါတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ယခုတည်ဆောက်မယ့် ရာ့ခရိုမာ ရေဒါအဓိကလုပ်ဆောင်မယ့် တာဝန်ကတော့ ရုရှားနိုင်ငံပိုင်နက်နှင့် သူ့ရဲ့မဟာမိတ်နိုင်ငံများဆီဝင်ရောက်လာမယ့် တိုက်ချင်းပစ်ဒုံးကျည်တွေကို ရှာဖွေထောက်လှမ်းနိုင်ဖို့ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ ယခုနှစ်မှအစပြုမယ့် ဒီရေဒါစနစ်ဟာ ၂၀၃၀ ခုနှစ်မှာ ချူ့ခိုးစခဲ ပင်လယ်ဘက်အထိ ကွန်ယက်ချဲ့ထွင်ပြီးစီးမယ်လို့ ယူဆရပါတယ်
လေးစားစွာ ခရက်ဒစ်ပေးပါတ.်……. knowledgeworms
ရုရှားနိုငျငံရဲ့ နောကျဆုံးပျေါ ဒုံးကညျြကာကှယျရေး ရဒေါ “ရာ့ခရိုမာ” Yakhroma ကို ခြူ့ခိုးစခဲ ပငျလယျဘကျတှငျ ၂၀၃၀ ခုနှဈမှာ အပွီးသတျ တညျဆောကျသှားမယျလို့ သိရပါတယျ။ အဲဒီ့ဒသေဟာ အမရေိကနျနိုငျငံ အလကျစကာ ပွညျနယျနှငျ့ အမြားကွီးမဝေးကှာတဲ့ နရောမှာတညျရှိပါတယျ။ဒီရဒေါဟာ အလိုအလြောကျလညျပတျမှာဖွဈပွီး ရဒေါစခနျးမှာအမွဲတမျး ဝနျထမျးကိုအသုံးပွုမှာ မဟုတျဘူးလို့လဲ သိရပါတယျ။ ၂၀၂၀ ခုနှဈ ဒီဇငျဘာလကုနျပိုငျးတှငျ ရုရှားကာကှယျရေး ဝနျကွီး Sergei Shoigu က နှဈကုနျဝနျကွီးမြားဘုတျအဖှဲ့အစညျးအဝေးတှငျ ကာကှယျရေးဝနျကွီးဌာနဟာ ၂၀၂၁ ခုနှဈမှာ ကရငျးဒသေရှိ ရှိ ဆီဗာစတူပေါ တှငျ Yakhroma ရဒေါကို စတငျတညျဆောကျလိမျ့မညျဟုပွောကွားခဲ့ပါတယျ။
ဝနျကွီးဟာ ဒီ ရဒေါရဲ့ separate nodes တှကေို လကွေောငျးပဈမှတျတှရှောဖှဖေို့ရာ ကာလီနငျဂရတျ၊ ဇီး နှငျ့ ဗျောကူတာ ဒသေတှမှောလဲ တညျဆောကျသှားမှာဖွဈတယျလို့ပွောကွားသှားပါသေးတယျ။ဒီရဒေါမှာ လယောဉျထိနျးခြုပျရေးစနဈတှေ၊ လကွေောငျးရနျကာကှယျရေးစနဈတှနှေငျ့ တခွား ဒဈဂဈြတယျစနဈတှပေါ ပါဝငျနိုငျမယျလို့သိရပါတယျရရှိထားသောသတငျးမြားအရ ယခု ရဒေါဟာ ကမ်ဘာပျေါတှငျ ပွိုငျဘကျကငျး ရဒေါဖွဈလာဖှယျရှိပွီး မီတာ၊ စငျတီမီတာ၊ ဒကျစီမီတာ၊ မီလီမီတာ အစရှိသဖွငျ့ ကွိမျနှုနျးလေးမြိုးဖွငျ့ အလုပျလုပျနိုငျမှာဖွဈပွီး ၂၇၀ ဒီဂရီမွငျနိုငျစှမျးရှိပါတယျ။
လကျရှိ ရှရုားဒုံးကညျြကာကှယျရေးစနဈမှာ အလှာ ၂ ခုဖွငျ့အလုပျလုပျနတောဖွဈပါတယျ။ အဲဒါတှကေတော့ Tundra လို့ချေါတဲ့ အာကာသဂွိုဟျတု ၄ ခုနှငျ့ ၎င်းငျးတို့နှငျ့ခြိတျဆကျထားတဲ့ မွပွေငျကှနျယကျ Voronezh ရဒေါတှပေဲဖွဈပါတယျ။ယခုတညျဆောကျမယျ့ ရာ့ခရိုမာ ရဒေါအဓိကလုပျဆောငျမယျ့ တာဝနျကတော့ ရုရှားနိုငျငံပိုငျနကျနှငျ့ သူ့ရဲ့မဟာမိတျနိုငျငံမြားဆီဝငျရောကျလာမယျ့ တိုကျခငျြးပဈဒုံးကညျြတှကေို ရှာဖှထေောကျလှမျးနိုငျဖို့ဖွဈတယျလို့သိရပါတယျ။ ယခုနှဈမှအစပွုမယျ့ ဒီရဒေါစနဈဟာ ၂၀၃၀ ခုနှဈမှာ ခြူ့ခိုးစခဲ ပငျလယျဘကျအထိ ကှနျယကျခြဲ့ထှငျပွီးစီးမယျလို့ ယူဆရပါတယျ
လေးစားစှာ ခရကျဒဈပေးပါတ.ျ……. knowledgeworms
← ထရမ့်အကောင့်ကို ပိတ်သိမ်းမှုနောက်ကွယ်က တွတ်တာ ၊ ဖေ့ဘုတ်တို့၏ ဆုံးရှုံးမှုများ…
ကို ဗစ် ကာ ကွယ်ေ ဆးကို ကျန်းမာေ ရး ဝန်ထမ်းများနှင့် အသက် ၆၅ နှစ်အထက်ြ ပည်သူ များကို ပထမဦးစားပေးထိုးနှံသွားမယ် →